Ekpere nye Saint Helena iji nwee nkụda mmụọ na? Kee ịhụnanya
Ekpere nye Saint Helena Inwe obi nkoropu nke nwoke ma ghara itufu ya, abughi ihe di nkpa ma obu ime ihe na-enweghị isi, o nwere ike buru ariri aririo, ma emere ya site na ihunanya ya na achoro inyeghachi ya.
Ọtụtụ na-eche na ekpere bụ igbu oge, mana nke bụ eziokwu bụ na ha amaghị ike ihe omume a na-eme anyị na ihe gbara anyị gburugburu.
Saint Helena bụ nwanyị dị ka onye ọ bụla ọzọ tara ahụhụ n'uwa a n'ọtụtụ ebe ya mere na onweghị onye dị mma karịa ya iji bulie ekpere anyị, ndị nke obi metụtara, nke anyị ji rịọ maka onye ọzọ site n'ihe a. Ihunanya ma obu ndi di na nwunye.
1 Ekpere nye Saint Helena
1.1 Ekpere Saint Helena imechu nwoke aka ma hapụ ya
1.2 Ekpere nke Saint Elena ka m chee banyere m ma kpọọ m
1.3 Ekpere nye Saint Helena iji kee ịhụnanya
2 Achọrọ m ịkwanye oriọna iji kpee ekpere?
Ọtụtụ maara ya dị ka Santa Elena ma ọ bụ dị ka Elena nke Constantinople mana ezigbo aha ya bụ Flavia Julia Helena na ọ bụ nwanyị eze nwanyị Rome nke akpọrọ Saint of the Catholic, Orthodox and Lutheran Church.
Onye nsọ a bụ onye webatara eze ukwu n'ụwa nke nyere ndị Kraịst nnwere onwe na mkpagbu okpukpe kachasị ogologo na akụkọ ntolite.
Elena, ebe di ya gbarapụrụ ya biri, bikwa ndụ nke ịdị nsọ juputara na mgbu na ahụhụ n'ihi ihụnanya na-enweghị ebe ọ bụla.
Ahụhụ a mere Santa Elena were afọ iri na anọ nke ọ bi na ya bụ onye agbaghapụrụ ma na-asọpụrụ mgbe ọ hụrụ di ya ka ya na nwanyị ọzọ nwere obi ụtọ n'okpuru otu ụlọ.
Ọ bụ onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya ghọrọ onye atụ nke ike na enyemaka maka ọtụtụ ndị nwere ike ịchọta onwe ha n'ọnọdụ ndị yiri ya.
Ekpere Saint Helena imechu nwoke aka ma hapụ ya
Saint Helena, Ebube nke ndi huru n'anya, abia m na-arịọ gi ka o nye m obi oma ya, (aha onye) ahapụkwala m, elela nwanyị ọ bụla ọzọ, na ọrụ, n'okporo ámá na ebe ọ bụla m na-eche maka onwe m, anụ ahụ na mmụọ nke (...) abịa, n'ihi na akpọrọ m gị, m na-agbanwe Njirimara, enwere m ike n’ebe ị nọ.
Santa Elena, dị ike n'ịhụnanya, enyela ya udo nke obi, na ọ naghị ahapụ echiche ya, na aha m na-ata ya ụta ma ghara ịhapụ ya, na ọ chọghị egbugbere ọnụ ndị ọzọ naanị nke m, na agụụ anụ ahụ niile maka onye ọzọ nwụrụ. Nwanyị, naanị m ka m nwere ike inwe obi ụtọ n'ihi na m kechiri ya.
Oh Saint Elena, ị ga - enyere m aka imeri obi gị ọzọ, zọda mpako na agwa gị, kwụsị imepụta ihe, (...) mara na ọ bụ nke m, tufuo ndidi ma ọ bụrụ na ọ dị na nke ọzọ, nro na Nchekwube di na ihunanya m (...).
You nwere mmasị n’ekpere dị ike nke Saint Helena iji mee ka obi daa nwoke mba ma hapụ ya?
Ibi na otu ụlọ anyị na onye anyị na ya na-emekọghị ihe ọ bụla na-enye anyị nkasi obi bụ otu n'ime atụmatụ kachasị sie ike ma na-eme ebe obibi taa.
Mmekọrịta ndị ahụ ịhụnanya na oke nhapụ hapụrụ mmekọrịta chiri anya mmekọrịta ahụ ka ọ bụrụ ebe a na-ajụ oyi ma bụrụkwa ebe a na-ejighị n'aka na enweghị mmebi bụ ihe na-agagharị na gburugburu ebe obibi niile, na-eji ike niile eme ihe niile. Ha na-emetọ gburugburu.
N'okwu ndị a ebe EKPERE: Gbalia ka anyi kpee ekpere O bu ebe ekpere nye He Hena di ike.
Ekpere nke Saint Elena ka m chee banyere m ma kpọọ m
Oh Saint Saint Helena dị ebube, na ị gara Calvary weta mbọ atọ.
Otu i nyere ya nwa gị nwoke Constantine, nke ọzọ ị tụbara ya n'ime osimiri, ka ndị na-anya ụgbọ mmiri wee nwee ahụ ike, nke atọ na-eburu ya n'aka gị dị oke ọnụ ahịa.
Saint Elena, mụ (aha gị) na-arịọ gị ka ị nye m ụgbụ nke atọ a, ka m wee tinye ya n’obi (aha onye ị hụrụ n’anya), yabụ enweghị udo, enweghị udo ọbụla ebe m na-enweghị ịdị ndụ, mgbe Achọla m ka m gosi ezi ịhụnanya gị.
Mmuo nke mmuo nke na - eme ka nkpuru obi m n’enye oria, n’inwu n’obi (nke ndi i huru n’anya), nke mere na o na - echeta m oge niile, hu m n’anya, fee m ofufe ma choo m, na ihe obula o nyere m, nke ike gi na aru, Saint Helena ohu m n’anya.
Udo na nkwekorita ahu enweghi rue mgbe o gha abia ma mu na m biri ma binyere m, ebe m na-ahukwasi m obi n'anya, nwe obi uto ma nwekwaa uche. Kwesịrị ntụkwasị obi nye m dịka nkịta, dịkwa nwayọ dịka nwa atụrụ na ngwa ngwa dịka onye ozi, na (aha onye ị hụrụ n'anya) abịakwute m ngwa ngwa, na-enweghị ike ọ bụla ma ọ bụ nke mmụọ nwere ike ịkwụsị ya.
Ka ahụ ya, mkpụrụ obi ya na mmụọ ya bia n'ihi na akpọrọ m ya ma kpasie ya ike ma chịa ya. Ọ bụrụhaala na ọ naghị adị nwayọ ma nwee mmụọ, nyefee m n'ịhụnanya m, akọ na uche ya agaghị enye ya udo. Ọ bụrụ na ọ ghara ụgha, ọ bụrụ na ọ rara m nye, mee ka ọ rịọ mgbaghara maka ime ka m taa ahụhụ.
(Aha onye ị huru n’anya) Bịa n’ihi akpọrọ m gị, ana m enye gị iwu, ịlaghachikwute m ozugbo (aha gị), site na ike nke St. Helena na ndị mmụọ ozi na-eche anyị nche.
Sɛ saa na ɛte a, yedi so!
Site n’okwukwe, ekpere niile dị ike na ikpe maka Ele Elena iche maka m ma kpọọ m bụ otu.
Ime obi a na ekpere niile si anyi n’obi bu uzo kacha mma n’ihi na ekpughere mmetuta na ntughari obi anyi nile n’ime obi anyi.
Gwa ya ka o chee echiche banyere m ọ bụghị ụzọ ịchịkwa echiche nke onye ọzọ mana ọ bụ ụzọ jigide ịdị n'otu na mmekọrịta ahụ.
Ezigbo ume anyị na ewepu n’anyị na-ekpe ekpere n’ezie ga-enyere anyị aka imeziwanye gburugburu anyị.
Rịọ Santa Elena ka ha nyere anyị aka ka onye ahụ pụrụ iche enweghị ike ịkwụsị iche banyere anyị ruo n'ókè nke inwe mkpa inyocha ụfọdụ ụzọ ọ bụrụgodi na ọ bụ site na ekwentị bụ otu n'ime ekpere ndị a na-ekpekarị taa.
Ulo malitere ime udo na nwa obere ka onodu a wee bidoghachi nzaghachi anyi na ele anya.
Ekpere nye Saint Helena iji kee ịhụnanya
Ezigbo Adaeze Santa Elena, taa abịakwutere m gị na okwukwe na olile anya, nyere m aka inwetaghachi (aha onye ahụ) m hụrụ n'anya, ịmara ọdịnihu na ugbu a, a na m arịọ gị ka ị hụ ndụ m, mee ( ...) tụgharịa uche ma ghọta njehie ahụ.
Saint Elena gọziri agọzi, maka ebere gị na-enweghị nsọtụ, nyere m aka inweta enyemaka ahụ ngwa ngwa, iji nwetaghachi onye m hụrụ n'anya, ịmara na mmetụta m dị ọcha ma nwee ezi obi, mee ka obi gị dị nro ka ị mara otu esi eji ịhụnanya m akpọrọ ihe.
Saint Elena, nne bụ onye nplaomi, Onye Kraist zuru oke, (…) abụghị onye iwe, mee ka uche ya dị n’uche, mee ka ya tụgharịa uche, na ihunanya nwere ike imeri ya, wezuga mmetụta ọjọọ nke na-akpaghasị uche ya, o mejọrọ, ọ hapụrụ ya Onye kacha gosipụtara, onye na-alaghachi n'ụlọ (...), anyị na-eche gị.
Oh Saint Elena nke obe, ama m na ị ga - eme ihe niile, ị gaghị ahapụ m, gee ntị n'olu m, nụ ekpere m ma na - arịọ arịrịọ m.
Nke a ekpere Saint Helena ka a na-ekekọta nwoke ka akwadoro n ’ọnọdụ ebe mmadụ abụọ n’ime mmadụ ahụ na - emekọrịta ihe na - eche ịhapụ ma ọ bụ gosipụta obi abụọ ụfọdụ nke na - amalite imebi ntọala siri ike nke mmekọrịta ahụ na - eweta nkụda mmụọ, ọgụ, ọgba aghara na esemokwu n’ụlọ. .
Nke ahụ bụ ihe ekpere na - emegharị ahụ, na onye nke ọzọ na - apụtaghị na mberede, nọnyere anyị ma ọ bụghị na-emegide uche ya mana kwenye onwe ya na ịnọ ala bụ nhọrọ kachasị mma ma si otu a gbanwee echiche ịhapụ ụlọ. .
Achọrọ m ịkwanye oriọna iji kpee ekpere?
Anyị na-akwado na ọkụ kandụl na-acha ọcha na mmalite ma ọ bụ na njedebe nke ekpere nke Helena Inwe obi nkoropu na ijiko ihunanya.
Oriọna bụ akara nke ekele. Anyị na-ekele senti a dị ike maka enyemaka ya niile na ndụ anyị,
Jiri okwukwe na ịhụnanya jiri ekpere niile.